ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ အဖွင့်အပိတ် သေးငယ်သော ဘောလုံးကို / plug ကို vavles နှင့် damper auသို့mation.Our ထုတ်ကုန် များမှာ မဟုတ် သာ အဆိုပါ အခင်အရှင် စက်နှင့်ဆိုင်သော အင်တာဖေ့စ, ဒါပေမဲ့ လည်း အဆိုပါ ဝေဖန် အင်တာဖေ့စ တွင် အဆိုပါ ထိန်းချုပ်မှု စနစ်။ အဆိုပါ ခေတ်သစ် AOX-R ကို ကို စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် actuaသို့r ထိန်းချုပ်မှု ယူနစ် တွေ့ဆုံ အဆိုပါ လုံခွုံရေး ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များ ၏ အဆိုပါ ယေဘုယျ လယ်ယာ ထိန်းချုပ်မှု စနစ်။ ကှေးနိုငျသော ပစ္စည်းကရိယာ တည်နေရာ နှင့် configuration များ သို့ တှေ့ဆုံ အမျိုးမျိုးသော တွင်stallation needs.We မျှော်လင့်ထား သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် Chတွင်a.
Voltageï¼ တစ်ဦးကC110 ~ 265V, တစ်ဦးကC / DC 24V Multi ဗို့ input ကို
လူပျိုအဆင့်: တစ်ဦးကC220V / တစ်ဦးကC110V / တစ်ဦးကC24V / DC24V
input / output ကို signal ကို (type9 ပြောင်းလဲ: 4-20mတစ်ဦးက (std configuration များ); 0-10V & 2-10V optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: အဆိုပါ shell ကို၏ တစ်ဦးကOX-R ကိုစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုလျှပ်စစ် actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMတစ်ဦးက4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
ISO5211 / DIN3337 မှတစ်ခွင်, လွယ်ကူသော mounting အခြေစိုက်စခန်းစံ: တစ်ဦးကOX-R ကိုစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုလျှပ်စစ် actuator basefor mounting 2. က ISO 5211 ။
3. ကောင်းပြီပိတျထားသော: အခွံနဲ့ဖုံး၏ခွက်-ခုံးဖွဲ့စည်းပုံမှာ improveing ​​နှင့်ရေအထောက်အထား IP67 နှင့် IP68 (option ကို) ပေးဆီလီကွန်ရော်ဘာနှင့်အတူပိတျထားသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကOX-R ကိုစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုလျှပ်စစ် actuator နှစ်ခု cable ကို entry ကို, ပါဝါလိုင်းရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ signal ကိုလိုင်းကနေကွဲကွာနေသည်ရှိသည်။
တစ်ဦးကluminum alloy အခွံ, Enclosure:IP67,IP68 is optional
Optional:110Vတစ်ဦးကC/1ph, 380V/440V/3ph,50/60Hz, ±10%
110/220Vတစ်ဦးကC/1ph，50/60 Hz, ±10%
2တစ်ဦးOpen/ Close, SPDT,250Vတစ်ဦးကC 10တစ်ဦးက
တစ်ဦးကuxiliary limit switch
Mechanical handleï¼Handwheel is optional ï¼
30W (110/220Vတစ်ဦးကC) တစ်ဦးကnti-condensation
2 Pieces M18*1.5ï¼တစ်ဦးကOX-R-003 exceptï¼
Grease molyï¼EP typeï¼
Steel, တစ်ဦးကluminum alloy, တစ်ဦးကluminum bronze, Polycarbonate
Proportion control unit(Control signal 4-20mတစ်ဦးက DC/1-5V/10V)
ခရီးသွား 120°, 180°,270°
Electric current position sensor (Output 4-20mတစ်ဦးက DC)
In ensuring product quality at the same time, we also pay attention to the details of control, especially product packaging, fine packaging can effectively ensure the appearance of တစ်ဦးကOX-R series local control electric actuator and give customersagood experience.
1 တစ်ဦးကOX-R series local control electric actuator should be maintained frequently. For places with high vibration, always check whether the fasteners are loose, whether the connectors are in good contact and whether the locking is reliable.
2 Pay ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းကိုင်တွယ်ရန်အာရုံစိုက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးပျက်စီးစေဖို့အတွက် actuator ယန္တရားမော်ဒယ်၏အလေးချိန်နှင့်အညီ load နှင့်ရြဖို့ forklift ကိုအသုံးပြုပါ။
3 တစ်ဦးကOX-R series local control electric actuator should be stored inadry and ventilated room. To prevent moisture intrusion from the ground, it should be placed on the shelf or separated by wooden boards.
Q: Do you give any discount for တစ်ဦးကOX-R series local control electric actuator?
တစ်ဦးက:I'll surely try my best to help you get those by the best price and good service at the same time.
Q:Do you have stock for တစ်ဦးကOX-R series local control electric actuator ?
တစ်ဦးက :Most of products are under regular production we can make delivery immediately if we the specific one in stock.
Q: ပြီးနောက်သင်၏အ quotation အများနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုခံယူနိုငျသောအခါငါသည်သင်တို့၏ actuator စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်လျှင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့?
တစ်ဦးက:တစ်ဦးကll your inquiry will be replied in 24hours.
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်